Dhalashada Saint Lucia
Muwaadinnimada Baasaboorka St. Lucia
MUWAADINIINTA SAINT LUCIA
Muwaadinnimada St Lucia - Xaraarada Dowlada - Single
Dhalashada St Lucia - Mashaariicda Shirkadaha - Single
Dhalashada St Lucia - NE Fund - Single
Dhalashada St Lucia - Mashaariicda Hantidhawrka Guryaha - Hal
Dhalashada St Lucia - COLID RELATEF BOND - Single
Dhalashada St Lucia - Mashaariicda Shirkadaha - Qoyska
Dhalashada St Lucia - NE Fund - Qoyska
Dhalashada St Lucia - Mashaariicda Guri Guri - Qoys
Dhalashada St Lucia - Xaraarada Dowlada - Qoyska
Muwaadinimada St Lucia - 19 XIRIIRKA DHAQANKA - Qoyska
MUWAADINIINTA SAINT LUCIA XULASHADA ADEEG
Bixinta lacagta muwaadinnimada ee Saint Lucia
Faa'iidooyinka Jinsiyadda Saint Lucia
Barnaamijka Saint Lucia wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku noqoto muwaadin gobolkan maalgashi. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee dhalashada Saint Lucia waxaa ka mid ah:
suurtagalnimada booqasho fiiso la'aan ah (ama fiiso imaatin ah) in ka badan 140 dal oo adduunka ah (oo ay ku jiraan illaa 90 maalmood fiiso la'aan EU);
fududeynta habka helitaanka fiisada muddada-dheer ee Mareykanka;
xawaaraha sare ee diiwaangelinta (laga bilaabo 2 illaa 6 bilood);
Kuwa heysta baasaboorka Saint Lucia looma baahna inay dalka ku noolaadaan. Faa'iidada kale ee muhiimka ah waa maqnaanshaha cashuurta dakhliga ee dadka degan cashuurta.
Shuruudaha helitaanka baasaboor
Da 'maalgaliye laga bilaabo 18 sano
Sumcad aan fiicnayn (shaqsi iyo ganacsiba)
Diiwaan dambi maleh
Suurtagalnimada in la xaqiijiyo asalka lacagaha
Ma jiraan dhibaatooyin caafimaad oo daran
Ku biirinta Sanduuqa Dhaqaalaha Qaranka. Lacagta ugu yar waa $ 100,000. Markay helaan baasaboor maalgashadaha iyo sayga / sayga / xaaska, qadarka maalgashiga wuxuu kordhin doonaa 140 kun oo doolarka Mareykanka, iyo qoys gaaraya ilaa 4 qof - ilaa 150 kun oo doolarka Mareykanka ah. Qaadhaanka lama soo celin karo.
Iibsiga hantida ma guurtada ah. Lacagta ugu yar waa 300 oo kun oo doolarka Mareykanka ah. Maalgashiga waxaa lagu sameyn karaa oo keliya guryaha ay dowladdu ogolaatay. Iibinta guryaha ma guurtada ah waa la ogolyahay 5 sano kadib.
Amniga Qaddarka maalgashiga - laga bilaabo $ 250. Maalgaliye ayaa iibsan kara bondyada dawladda ee aan dulsaarka lahayn. Haddii qoys ka kooban 4 qof ay helaan dhalashada Saint Lucia, maalgashigu wuxuu noqon doonaa $ 250,000 (qaan gaadhnimo 7 sano) ama $ 300,000 (bislaansho 5 sano). Haddii ay jiraan in ka badan 4 qof oo qoyska ka tirsan, midkiiba waxaa loo baahan doonaa 15 kun oo doolarka Mareykanka ah.
Ganacsi. Waa suurtagal in lagu maalgeliyo ugu yaraan $ 3.5 milyan mashruuc lagu helay oggolaanshaha dowladda. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la abuuro ugu yaraan 3 shaqo. Meelaha maalgashiga loo heli karo waxaa ka mid ah hoteellada, maqaayadaha, kaabayaasha gaadiidka, ururrada cilmi baarista, iwm.